February 21, 2021 12606
यी ग्रहहरुले तपाईको आयआर्जनमा समेत प्रभाव पार्ने गर्छन। आज हामी तपाईहरुलाई कुन बार जन्मेकाले कति सम्पति कमाउन सक्छन भन्ने विषयमा जानकारी गराउदैछौ।
शुक्रबार जन्म भएका व्यक्तिहरुले गरेका हरेक कामको नतिजा ढिलो आउने भएपनि सकारात्मक हुने गर्छ।
Prevराति सुत्नुबेला कपाल बाध्ने की छोड्ने ? जान्नुहाेस्
Nextघरको ढोका अगाडी कहिल्यै नराख्नुस यी ४ चिज, रिसाउँछिन् लक्ष्मी
धु’वा र ख’रा’नी बनेर अस्ताए कन्चन तिमिल्सिना गाउँले सबैका आँखा थामिएनन् आमाको अवस्था भयो एस्तो (भिडियो)
खुशीको खबर ! ह्वात्तै घटे संक्रमित, झण्डै ११ हजारको परिक्षण गर्दा आइतवार संक्रमित हुनेको संख्या यस्तो छ